“Ku guuleysiga koobab ayaa ka wanaagsan in la dhaliyo 50 gool” – Mbappé – Gool FM
“Ku guuleysiga koobab ayaa ka wanaagsan in la dhaliyo 50 gool” – Mbappé
Dajiye December 17, 2021
(Paris) 17 Dis 2021. Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa sheegay in ku guuleysiga koobab kuwaasoo uusan ku guuleysan xilli ciyaareedkii hore uu ka dhiganayo mudnaanta koowaad xilli ciyaareedkan.
Weeraryahanka da’da yar ayaa qirtay kaddib wareysi uu siiyay TV-ga Paris Saint-Germain, in 2021 uu ahaa sanad cajiib ah oo heer shaqsi ah, balse uu awoodi waayay inuu kula guuleysto kooxdiisa Paris Saint-Germain horyaalka Faransiiska iyo tartanka Champions League.
Kylian Mbappé ayaa inta uu ku guda jiray wareysigan waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ugu dambayntii, maxay ka dhigan tahay inaad dhaliso 50 gool haddii aanad koobab ku guulaysan? waxaan doorbidayaa hadda inaan dhaliyo wax ka yar oo aan sameeyo caawinaad si aan ugu guuleysto horyaalka iyo Champions League.”
“Dabcan guulaha shaqsiyadeed waa kuwo wanaagsan, laakiin kuma raaxaysanaysid haddii aadan ku guuleysan, sidaas darteed, ujeedka ugu muhiimsan hadda waa inaan ku guuleysto koobab.”
Yeelkeeda, Mbappe ayaa carabka ku adkeeyay in tirakoobyada ay muhiim u yihiin isaga sababtoo ah way sii jiraan, laakiin si loo sameeyo taariikh, in qodobka tirakoobka kaliya aysan ku filneyn, ee loo baahan yahay in la abuuro dareen.
Klopp oo ammaanay Salah wuxuuna sharaxay sababta loo badalay kulankii Liverpool iyo Newcastle
Xavi oo doonaya inuu la soo saxiixdo xiddig ka tirsan Man City qiimo kasta uu ku kacayo